Motor ve Traktör Üretiminde Başarı Örneği ’TÜMOSAN’ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အင်ဂျင်နှင့်ထွန်စက်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အောင်မြင်မှု 'TÜMOSAN'
20 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အင်ဂျင်နှင့်လယ်ထွန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် Tumosan ၏အောင်မြင်မှုဥပမာ
လာသောအခါ Erbakan 1975 တစ်နှစ်, ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်စက်မှုနှင့်ဓာတုစက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း (MKEK), တူရကီစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာကော်ပိုရေးရှင်း (TZDK), Şekerbankတူရကီရေကြောင်းဘဏ်နှင့်ပြည်နယ်စက်မှုလက်မှုနှင့်အလုပ်သမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် 100 နှင့်အတူလက်တွဲအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပစ်မှတ်နှင့်အတူတထောင်အင်ဂျင် Necmettin အမိနျ့တျောကိုဖယ်ရှား Türk Motor Sanayi နှင့် Ticaret Anonim Şirketiတို့သည်TÜMOSANကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
Tümosan၏ပထမဆုံးအထွေထွေမန်နေဂျာမှာ Prof.Dr. Sedat Çelikdoğan။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတူတူအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကားလမ်းတူရကီလယ်ထွန်စက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖန်ဆင်းနှင့်အတူလယ်ထွန်စက်ပေးအပြင်, TÜMOSANဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူ။
Sedat ikelikdoğanသည်အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်လာပြီးသူ့အဖွဲ့သည်မော်တာစီမံကိန်းများကိုလျင်မြန်စွာစတင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသို့ငွေကြေးအခွင့်အလမ်းများဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်။ 1976 တွင် Fiat နှင့်အီတလီလယ်ထွန်စက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကို Fiat နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစက်ရုံကို Konya တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် Volvo နှင့်အတူ Truck Engines Project တွင်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးကုန်တင်ယာဉ်များအတွက်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Truck Engines စီမံကိန်းတွင် Mercedes နှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီး Aksaray တွင်စက်ရုံတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်ချက်ချင်းပင်ကားမောင်းသူများနှင့်ဗင်ကားများအတွက်ဒီဇယ်အင်ဂျင်စီမံကိန်းတွင်ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီနှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များရရှိခဲ့ပြီး driveline စီမံကိန်းတွင်ဂျာမန် ZF နှင့်ပါ ၀ င်သည်။
ထိုစီမံကိန်းများကြောင့် 100 တစ်ထောင်အင်ဂျင်နှင့် 30 ထောင်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤစီမံကိန်းကြောင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကားနှင့်အနောက်နိုင်ငံများကြောင့်တူရကီအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုစတင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပိတ်ဆို့မှုနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောဤစီမံကိန်းအားလုံး၏ဘဏ္flowာရေးစီး ၀ င်မှုသည်ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ အစိုးရစဉ်းစားသောအခါထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရပ်တန့်သွားသည်။ 1977 အတွက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Necmettin Erbakan ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစိုးရတွင်ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသောအခါ Sedat ÇelikdoğanအားTümosan၏အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Tümosanပြန်လည်ကြီးထွားလာသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ 1980 တော်လှန်ရေး။ Sedat Çelikdoğanကိုထပ်မံပယ်ချလိုက်သည်၊ အလုပ်နှေးကွေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။
TÜMOSANအင်ဂျင်နှင့်လယ်ထွန်စက်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ Albayrak Group အား 2004 တွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Albayrak Group သည်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
ယနေ့TÜMOSANသည်အင်ဂျင်နှင့်လယ်ထွန်စက်များကို Konya နှင့် 1.600 ပိတ်ထားသောNရိယာတွင် 93 နှစ်ပတ်လည်တွင်ထုတ်လုပ်နေသည်။ တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူစုစုပေါင်း 75.000 နှစ်ပေါင်း 45.000 အင်ဂျင်များနှင့်လယ်ထွန်စက်ယူနစ်။ ကုမ္ပဏီသည်လက်ရှိတွင် 10 အဓိကမော်ဒယ်ဖြစ်သော 25 စီးရီးအောက်တွင်လယ်ထွန်စက်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
01 + 2016 31 နှစ်ကုန်တွင် စတင်၍ 2017 + 8 နှင့် 1 + 2018 အလိုအလျောက်ဂီယာအတွက် 8 + 1 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ 01 + 2017 တွင်သြဂုတ်လ XNUMX တွင်စတင်ခဲ့ပြီး XNUMX ဒီဇင်ဘာ XNUMX တွင်စတင်ခဲ့သည် XNUMX + XNUMX လက်စွဲဂီယာသည် XNUMX နှစ်ကုန်တွင်စတင်သည်။ စက်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်မှုများကိုပြောင်းလဲစက်များဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
US PUSAT ile ဟုခေါ်သောသံချပ်ကာယာဉ်၏ပထမဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံကိုTÜBİTAK R & D စီမံကိန်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်မတ်လ 2019 တွင်ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် PUSAT အတွက်ဟိုက်ဘရစ်ပါဝါအထုပ်နှင့်သံချပ်ကာတိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များအတွက်ထုတ်လုပ်သော P ALP” power group သည်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ TÜMOSANသည်TÜMOSANရှိ 100 ÖMTTZAဒီဇယ်အင်ဂျင်များထုတ်လုပ်ရန် SSB နှင့် FNSS တို့နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ6တွင်TÜMOSANသည်ပိုလန်ကုမ္ပဏီ URSUS နှင့် 2018 တွင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထား set ကို bogies နှင့်နောက်တွဲယာဉ် bogie ဘီးမော်တာစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့များ, မော်တာ bogie monoblock ဘီးအင်ဂျင်ရိုး bogies, နောက်တွဲယာဉ် monoblock ဘီး bogies, နောက်တွဲယာဉ်ဝင်ရိုး bogies ... 12 / 10 / 2017 TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအမျိုးသားလျှပ်စစ်မီးရထားသည်စီမံကိန်းအင်ဂျင် bogie နှင့်နောက်တွဲယာဉ် bogie ဘီးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အင်ဂျင် bogie monoblock ဘီး၊ အင်ဂျင် bogie ဝင်ရိုး, နောက်တွဲယာဉ် bogie monoblock ဘီး၊
Sakarya မီးရထားထုတ်လုပ်မှုအတွက် de အမှတ်တံဆိပ်သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည် 13 / 05 / 2014 Sakarya Demiryolu Üretiminde De Marka Olacak :Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Erol İnal'ı ziyaret…
နယူးမျိုးဆက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို right သတ်သွားပါပြီ 09 / 04 / 2015 ဥရောပသမဂ္ဂ၏သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီအခွင့်အာဏာအဆင်ပြေတူရကီမီးရထားစက်များတပ်ဆင်ထားဘက်ပေါင်းစုံဘရိတ်စနစ်၏မျိုးဆက်သစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် bogie ၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ " ... : နယူးမျိုးဆက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး Wagon ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို right သတ်သွားပါပြီ
ထုတ်လုပ်မှု Wagon TÜDEMSAŞအတွက်အရည်အသွေးမှ Key ကိုစက်ရုပ်လက်နက် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) 05 / 04 / 2016 Wagon ထုတ်လုပ်မှု၏အရည်အသွေးအတွက်သော့ချက်TÜDEMSA၏စက်ရုပ်လက်နက် - စက်ရုပ်ဂဟေဆော်သောဘိုဂျီထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည်TÜDEMSA၏မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည်။ လူ့လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအရင်းအမြစ်များသည်ဂဟေဆော်ခြင်းမှဂဟေဆော်ရန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အတူတူပင်ဂဟေဆော်သူကွဲပြားသည်။
စက်ခေါင်းနှင့် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘယ်မှာကျနော်တို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဘာတွေလဲ? 09 / 01 / 2012 စက်ခေါင်းများနှင့်ကုန်တင်လှည်းများကိုEskişehirရှိTÜLOMSAŞ၊ Sakarya ရှိTÜVASAŞရှိရထားများနှင့်ခရီးသည်လှည်းများနှင့် Sivas ရှိTÜDEMSA freight ရှိကုန်တင်ယာဉ်များတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ TCDD ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် 80 electric ahat
Sakarya မီးရထားထုတ်လုပ်မှုအတွက် de အမှတ်တံဆိပ်သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
ထုတ်လုပ်မှု Wagon TÜDEMSAŞအတွက်အရည်အသွေးမှ Key ကိုစက်ရုပ်လက်နက် (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
စက်ခေါင်းနှင့် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘယ်မှာကျနော်တို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဘာတွေလဲ?
AK ပါတီခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ATA Tepebasi Bursa, Eskisehir Tramway ထုတ်လုပ်မှုသင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ခင်မှာသူကဆိုသည်။
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (325) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)